Kenya : Maurine, Miaina Miaraka Amin’ny VIH no Sady Mpikatroka Ao Amin’ny Fikambanana “Repacted” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2018 8:16 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2011)
Amin'ny alàlan'ny fampiasàna ny “Magnet”, tarika mpanao tantara an-tsehatra, mba hisarihana ny fahalinan'ireo mponina, ary indrindra fa ny tanora, amin'ny fanaovana tantara an-tsehatra mampiseho ny zavamisy marina manodidina ny olana ara-pahasalamana toy ny VIH:SIDA sy ny raboka, manohy ny asany ao amin'ireo kaominina manodidina azy ny fikambanana Repacted ao an-tanànan'i Nakuru, ao Kenya, izay misitraka fanampiana ara-bola tsy tapaka avy amin'ny Rising Voices. Ampiasain'ireo mpikambana ao amin'ny Repacted ny tantara tsangana eny an-dalambe mba hanentanana sy hampianarana ny vahoaka, ary koa mba hanazavana ny fomba hatao mba hisorohana ireny olan'ny fahasalamana ireny.
Vao haingana ny iray amin'ireo mpikambana ao anatin'ny tarika, Maurine, no niavaka noho ny asany tao amin'ny bilaogin'ny tetikasa Repacted, ho toy ny “iray amin'ireo mpikatroka mpisava làlana [amin'ny ady atao] amin'ny VIH ao an-tanànanay sy ireo manodidina an'i Nakuru.” Fito taona eo ho eo izao, tamin'ny 2004, tratr'ilay viriosy i Maurine, ary taorian'ny nahafantarany an'izay, dia navadiny io zava-mavesatra io ho toy ny fahafahana iray hampianarana ny hafa. Noraisim-peo tao amin'ny Repacted mba hitantara ny aminy hatramin'ny nahafantarany ny fitondràny ilay otrikaretina. Ny lahatsoratra nitantaràny ny fomba nataony hanaovana ny fitiliana tany amin'ny toeram-pitsaboana iray tao an-toerana, taorian'ny faharariany, dia tena be mpamaky tokoa tao amin'io bilaogy io :
2 herinandro taorian'izay no nolazaina taminy fa hakàna ny valin'ny fitiliana, ary zavatra tena tsy nampoiziny velively fa nolavin'ireo mpitsabo ny hanome izany. Nisisihan'ireo mpitsabo ny tsy maintsy hitondràny olona hafa hiaraka aminy. Soa ihany tamin'io andro io, nisy namana iray niaraka taminy izay niandry azy tao amin'ny efitrano fiandrasana, dia lasa izy nandeha naka azy tany. Ary tamin'izay vao natolotra an'ilay namany ny valin'ny fitiliana. Ilay naman'i Maurine no voalohany nahafantatra izay valiny tao izay azoko antoka fa taorian'ny niresahany mitokana tamin'ireo mpitsabo tao amin'ny laboratoara no nampahafantarana azy. Zavatra tsy nampoiziny fa nilaza taminy ilay namany hoe mahafantatra tsara ny zavatra lalovany satria izy koa efa tratry ny otrikaretina VIH. Efa telo taona izy izao no miaina miaraka amin'ilay aretina.
Maurine (miakanjo mavo) milalao ao anaty tantara iray an'ny “Magnet Theater”
Miaiky i Maurine fa mora kokoa ho azy ny tsy fahafantarany ny manjo azy, satria talohan'ny nanaovany ilay fitiliana, tsy nila niatrika ireo vesatra naterak'ireo fampahafantarana totoafo mifandraika amin'ny VIH:SIDA izy. Saingy vantany vao fantany fa mitondra ilay otrikaretina izy, “niova ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainany. Milaza ny heviny izy, ary amin-kery.” Tamin'io fotoana io aho no niditra nanatevina laharana ny tarika Repacted sy nahazo fahatokisantena mba hitantara ny tantarany any am-bohitra rehetra any:
Tsapan'i Maurine fa manana tantara iray tsy maintsy tantaraina izy, ary ao anatin'ny tambajotra matanjak'ireo mpiray ombona antoka, mpiahy sy mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny REPACTED, nomena famporisihana izy ary nandresy lahatra ny tenany hoe tsy maintsy omena sehatra itenenany ireo tanora mitondra ny otrikaretina VIH. Nisy notantaraina tamin'ireo tanora ny tsy fahampiana traikefa tena niainana , ary tena marina manokana izany ho an'ireo tanora mitondra ilay aretina. Mahatsiaro menatra izy ireo na mahatsiaro ho diso noho ny nahazoany ilay viriosy ka mihevitra fa tokony handainga rehefa milaza ny momba ny teotenany, tsy mitsotra ny marina.
Ireny toejavatra ireny no nanampy an'i Maurine hitantara ny aminy sy hanazava ny fomba nentin'ny filalaovany tao anatin'ny tarika Repacted nanampy ny tenany manokana :
Tena nanampy marina an'i Maurine hijoro amin'ny maha-olona azy ny firesahana. Nitondra zotra iray vaovao teo amin'ny fiainany izany – tsy hoe ohatra iray fotsiny ho an'ireo olona marobe, fa koa nanosika azy hisaintsaina momba ny fiainany sy hanao izay rehetra azony atao mba hahatonga izany ho zavatra miabo. Nisy fiantraikany miabo teo aminy ny nidirany tao amin'ny tarika REPACTED tamin'ny anaran'ny tenany manokana. Olona matanjaka i Maurine ankehitriny, manana fahalalàna sy traikefa bebe kokoa amin'ny fiainana raha miohatra amin'ireo tanora maro eo amin'ny faha-26 taonany. Nanomboka tsapany hoe tsara tohana kokoa izy ary misy manome lanja, noho izy afaka mivelatra anaty faribolana samihafa. Mihevitra ny tenany ho anaty foko, na karazana hafa mihitsy i Maurine, eto izy dia miaraka amin'ny tarika REPACTED mba hampianatra ny olona. “eto aho, vehivavy, mitondra ny otrkaretina VIH, ary miaina ny fiainako amin'ny fomba miabo sy toy ny andavanandro. Azo atao tsara izany” Azo atao tsara.